Daraasad ” Dadka Dakhligooda hooseeyo waxay u dhintaan Xanuunka Corona ” – Somaliska
[ November 24, 2020 ] Raisel Wasaaraha Britain oo khudbad dheer kaga hadlay Waqtiga la qaadayo Xayiraadaha Saaran Dalka	Wararka Maanta Somaliska
[ November 24, 2020 ] Tirada Dhismashada Corona ee Dalka Taliyaaniga oo mareysa 50,000 kun	Wararka Maanta Somaliska
[ November 23, 2020 ] Dowlada Sweden oo soo jeedisay in Caruurta Lix sano jirka ah si qasab loogu bilaabo Waxbarashada	Wararka Maanta Somaliska
[ November 23, 2020 ] Khudbadii Raisel Wasaaraha Sweden uu ka jeediyay Talafashinka oo uu kaga hadlay arimo badan	Wararka Maanta Somaliska
[ November 23, 2020 ] Booliska Norway oo gudaha u galay Maqaaxi Somali ah oo 22 Qof ku jirtay	Wararka Maanta Somaliska
HomeWararka Maanta SomaliskaDaraasad ” Dadka Dakhligooda hooseeyo waxay u dhintaan Xanuunka Corona ”
Daraasad ” Dadka Dakhligooda hooseeyo waxay u dhintaan Xanuunka Corona ”
November 19, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Daraasad dhawaan lasoo saaray ayaa lagu sheegay in dadka dakhligooda hooseeyo isla markana ku nool goobaha danta yar ay halis ugu jiraan dhimashada Xanuunka marka loo eego dadka kale ee ku nool goobaha kale ama hela dakhli ku filan.
Warbixinta waxaa soo saaray xaruunta Cudurada faafa iyo Dawooyinka ee Magaalada Stockholm waxana warbixinta ay sidoo kale muujineysa in dadka uu soo galo Dakhliga hoose ay afar laab ka badanyihiin dad kale halista Cudur Corona.
Anton Luger oo warbixinta lasoo saaray madax ka ah ayaa sheegay in farqi weyn u dhaxeeyo labada koox marka ay timaado dhanka dakhliga soo galo.
Warbixintan ayaa la bilaabay bishii July iyadoo ay ka qeyb galeen bulshooyin kala duwan oo ku nool Dalka Sweden gaar ahaan gobolada Dalka.
Anna Sarky oo bare sare ka ah Jaamacada Uppsala ayaa sheegay in warbixinta ay caawineyso dad badan oo sabool ah.
Wiil 19 Sano jir ah oo lagu xukumay Xukun 12 sano ah
Sweden 19 qof oo corona u dhimatay tirada guud oo mareysa 6340
Dadka Hawlgalka Sweden oo lacagta loo kordhinayo Canshuurtana laga dhimayo
Maxaa ku soo kordhay Sharciga isku keenista Qoysaska iyo Midka ku meelgaarka ee laanta Socdaalka Sweden